अफिम र गाँजा सहित तीन प्रक्राउ | Nagarik News - Nepal Republic Media
अफिम र गाँजा सहित तीन प्रक्राउ
४ मंसिर २०७४ १ मिनेट पाठ
रुकुम- अफिम र गाँजा सहित प्रहरीले तीन जनालाई प्रक्राउ गरेको छ। मुसीकोट नगरपालिका वडा नं. ८ साँखका ३८ वर्षिय हिमवहादुर पाण्डे र सोही नगरपालिका वडा नं. ७ का २३ वर्षिय कमल र विजय रातवलाई प्रक्राउ गरेको हो।
पाण्डेलाई १७ केजी अफिम र एक नाल भरुवा बन्दुक सहित प्रक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता ऋिषिकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । पाण्डेलाई उनको घरवाटै प्रक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले २०७३ मंसीर १५ गते ३० केजी अफिम अफिम बरामद गरेको थियो । अभियुक्त फरार थिए । पाण्डे उनै अभियुक्त भएको प्रहरीको भनाई छ । यता रावतलाई गाँजा घर वसार पसार पार्दै गर्दा साँख बजारवाट प्रक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक समेत रहेका ढुंगानाले जानकारी दिए । उनीहरुवाट ९० केजी गाँजा समेत बरामद गरिएको छ । रावतलाई लागु औषध नियन्त्रण २०३३ अनुसार मुद्दा चलाइने हुने र पाण्डेलाई हातहतियार तथा खरखजना २०१९ बमोजिम मुद्दा चलाईने प्रहरीले जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ १७:५८ सोमबार
अफिम गाँजा सहित प्रक्राउ
एक्याप क्षेत्रमा २१ जना पाहुना
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) सन् १९८६ मा स्थापना भयो। तर यसले औपचारिक रूपमा १९९२ देखि मात्र अन्नपूर्ण क्षेत्र पुगेका विदेशी पर्यटकको तथ्यांक राख्न थाल्यो। पछिल्लो समय (सन् २०१९) मा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एक लाख ८१ हजार विदेशी पाहुना पुगेका थिए। वर्षभरिमा त्यत्ति धेरै पाहुना पुग्ने क्षेत्रमा सबैभन्दा कम संख्यामा जाँदा पनि महिनामा पाँच हजारको हाराहारीमा त्यो क्षेत्र (एक्याप) मा विदेशी पाहुना रहिरहन्थे।